Waa maxay roob dhoobo sideese loo sameeyaa | Saadaasha Shabakadda
Xaqiiqdii waligaa markhaati ayaad ka ahayd a dhoobo dhoobo. Waxaa loogu yeeraa markii magaalooyinka ay ku daboolan yihiin lakab dusha sare ah iyo carro roob ka dib. Guud ahaan, roobab ayaa ka da'aya aag hawada iyo dhulkaba la nadiifiyey oo la nadiifiyey. Si kastaba ha noqotee, inta lagu guda jiro roobabkan wax waliba waa ka sii wasakheeyaan sidii ay ahaan jireen. Waana taas ifafaalahan caan ku ah ka tagida gawaarida dhoobada ka buuxdo.
Ma jeceshahay inaad ogaato sababta dhoobo dhoobo ah u dhacaan iyo goorta ay badanaa dhacaan?
1 Maxaa Roobab Mud ah u Dhacay
2 Falanqaynta roobabka
3 Saamaynta xun
4 Intee in le'eg ayuu soconayaa?
Maxaa Roobab Mud ah u Dhacay
Roobabkan ayaa ah kuwo aad u badan guga iyo xagaaga. Si kastaba ha noqotee, waa dhacdo saadaasha hawada ah oo dhici karta wakhti kasta oo sanadka ah. Waa wax ku dhow Spain marka loo eego booskeeda. Sababta ay u dhacayaan waxay ku jirtaa boodhka Afrika. Saxaraha Saxaraha wuxuu u dhow yahay Jasiiradda Iberian Peninsula. Tani waxay keenaysaa in dabaylaha xooga badani ay ku daadiyaan dhamaan wixii siigada ah dalkeena.
Marka siigada hawada ku jirta ee samada u shaqeysa sidii nukliyeerka uumiga 'hygroscopic condensation nuclei', waxay gacan ka geysataa sameynta daruuro roob. Waxaa weheliya xasillooni darrada jawiga iyo dabaysha is beddeleysa, qaaciddada loogu talagalay roobabkan dhiiqada ah ayaa la dhammaystiray. Markay roobabku da'ayaan, cirka iyo gawaarida labadaba waxaa lagu rinjiyeeyay midabbo dhoobo ah iyo dhoobo.
Waxaa sidoo kale loogu yeeraa "daadinta dhiigga" meelaha qaarkood. Tani waa sababta oo ah xilliga diirimaadka, dhoobada roobku soo da'ay waxay heli kartaa midab casaan yar leh. Inta lagu jiro xilliyadan roobka waxaa si aad ah looga hadlayaa Saxaraha iyo saameynta ay ku leedahay tayada hawada Spain.
Waana in lamadegaanka si joogto ah u socda boodhka ku soo bandhiga hawadeena. Waxay kuxirantahay nidaamka dabaysha iyo xooggeeda, xaddiga boodhka ee gala Isbaanishku waa badan yahay ama yari.
Roobabkan ayaa guud ahaan la saadaalin karaa iyada oo ay ugu wacan tahay sawirrada dayax gacmeedka. Sawirada laga helay dayax gacmeedka, waxaad ku arkeysaa qulqulatada niyadjabka oo jiidaneysa daruur boodh ah. Marka cadaadiska hawadu hoos u dhacdo meel, hawadu waxay ku wareegi doontaa aagga cadaadiska hooseeya. Waa markaa marka, taas oo ku xidhan xag-xagashada meesha aan joogno, in la yiri hawo ayaa ku wareegi doonta goobo ku wareegsan aagga cadaadiska hoose ee jihada saacad-gees ama gees-ka-gees.
Roobab dhoobo ah maahan inay noqoto hal mar oo keliyalaakiin waxay socon kartaa maalmo. Waxaas oo dhami waxay kuxiran yihiin xaaladaha dabaysha iyo jihada. Haddii xasilooni-darrada jawiga ee ay samaysteen daruuraha roobku ay sii socdaan dhawr maalmood oo dabayshu keento boodh badan oo Sahara ah, roobab dhaca ayaa dhammaantood noqon doona dhoobo.
Caadi ahaan, meelaha ugu badan ee saameeya roobka dhoobo ku sugan Andalus. Tani waxay ugu wacan tahay dhawaanshaha qaaradda Afrika. Waxaa sidoo kale laga ogaan karaa aagagga dhexe iyo xitaa waqooyiga Spain, laakiin leh soo noqnoqosho iyo xoog. Masaafada badan ee jirtaa, way yartahay in ay dhacdo.
Saamaynta qubeyska dhoobada ayaa si cad loogu arkaa dayaxa gaariga. Dhacdo ka mid ah kuwan ka dib, waxaad arki kartaa sida gawaarida midabkoodu yahay bunni u muuqdaan. Waxay umuuqataa inay soo mareen dhiiqo dhiiqo ah.
Sheygu kuma koobna oo kaliya baabuurta, laakiin sidoo kale waxaa lagu arki karaa jidadka iyo xitaa caleemaha geedaha. Haddii maalmahaas aad eegto cirka, waxaad arki kartaa in dhawaaqa daruuraha uusan ahayn mid cad, laakiin uu qaadanaayo midab daruur leh.
Mid ka mid ah saameynta ay roobabkani leeyihiin marka ay dhacayaan xagaaga ayaa ah kororka kuleylka. Sababtuna waxay tahay hawada ay boodhka Saxaaraha keeneysaa way ka diiran tahay tan ku jirta jasiiradda.
Intee in le'eg ayuu soconayaa?
Dhacdadan ayaa dhici karta wakhti kasta oo sanadka ah. Si kastaba ha noqotee, way ku badan tahay xilliyada xagaaga iyo bilaha guga. Badanaa hakinta boodhka ku jira cimilada wuxuu socon karaa inta u dhexeysa 24 iyo 60 saacadood. Taas ka dib, waxay bilaabmaysaa inay baaba'do.
Waa inaad maskaxda ku haysaa taas 70% dhamaan boorka aduunka oo dhan wuxuu ka yimaadaa lama degaanka Saxaraha. Tani waa macluumaad aad muhiim u ah in la tixgeliyo si loo ogaado saameynta uu ku leeyahay nidaamka deegaanka deegaanka meeraha oo dhan.
Dhoodaan kaliya maahan inay wasakheena ka dhigto jidadkeena iyo gawaarideena, laakiin sidoo kale waxay ku darsataa nafaqooyinka dhulka iyo badaha. Macdanta la joojiyay, bakteeriyada, nabarrada iyo manka ayaa la socda boodhka iyo ciidda ka hooseysa Saxaraha. Guud ahaan, waxay maareeyaan inay ka gudbaan masaafo aad u badan si ay u gaaraan meelaha ugu badan ee aan laga filayn. Sida, tusaale ahaan, sariirtaada hoosteeda ama gudaha qaaradda Yurub kumanaan kiilomitir.
Waxaan rajeynayaa in hadda aad awooday inaad ogaato sababta ay dhacdooyinkan u dhacaan 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay roob dhoobo sideese loo sameeyaa?
Barafka iyo da'da barafka